SIDA LOO KORO QUINCE EE DALKA, TALOOYIN KU SAABSAN BEERTO IYO DARYEELKA - BEERTA
Dhab ahaantii, waxay aad ugu egtahay geedka tufaaxa iyo pear, maaddaama ay ka mid tahay qoys isku mid ah oo leh iyaga - rosaceous. Si kastaba ha ahaatee, quince waa caleemaha gaarka ah ee dhirta, kuwaas oo ay ku jiraan dhowr nooc. In beerta, ugu caansan yihiin cagaarka iyo weyn-fruited.
Ma taqaanaa? Quince waxaa ku jira nafaqooyin badan: Fitamiin C, E, B1, B2, B6, PP, carotene, pectin, cusbada potassium, fosfooraska, birta iyo naxaas, iyo leeyahay hanti-barar, kicin iyo guryaha loo yaqaan 'astringent'. Waxaa sidoo kale loo yaqaan "apple gold".
Sida loo koro quince ee dalka, doorashada ee goobta
Baasto caadiga ah - warshad koonfurta, laakiin waa mid aad u adag oo aan qabyo ahayn marka koraan. Meesha quince koraan waa in si fiican u iftiimaa oo laga ilaaliyaa qoraalada, haddii kale ma sugi kartid goosashada wanaagsan. Waxaa fiican in la beero quince ee dhexda beerta, laakiin waqti isku mid ah geedaha deriska ah waa in ay ahaadaan fogaan ah oo aan ka dhawayn 2 m, si aanay u joojin qoraxda.
Waa muhiim! Isku-goynta-pollination ku kordhiyaan dhalidda ka fiican ee quince. Si arrintan loo sameeyo, ugu yaraan hal geed oo miro ah oo ka mid ah qoyskan waa inay koraan goobaha: quince, tufaax ama geedo kale.
Maxay tahay in dhulka la quinceo
Cagaarshadu waxay leedahay nidaam xidideysan, sidaa daraadeed waxay jecel yihiin carrada nafaqo leh. Quince ayaa sidoo kale koraan on carradu ciidda carrada, laakiin beergooyska noqon doonaa si muuqata ka sii xun. Waxaa si fiican loogu kori karaa meelaha meelaha biyaha ku yaalla ay ku dhow yihiin meel aan ka fogeyn mitir.
Waa maxay iftiinka, heerkulka iyo qoyaanka
Ogaanshaha sida ay u koraan quince ee xagaaga xagaaga, waxaad heli kartaa goosashada wanaagsan ee miraha caafimaad leh. Sidaas, waxay u baahan tahay badan oo iftiin ah, laakiin waxay u tahay wax aan ku filnayn qoyaanka. Tani waa warshad kuleyl ah oo jecel, sidaas darteed waa fiicantahay haddii celceliska heerkulka maalinlaha ah ee ka sarreeya + 9 ° C.
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato markaad beerto quince
Wixii beerta si guul leh ee quince waa in la ilaaliyo xeerarka beeritaanka iyo dayactirka xiga.
Geedo quince waa la beeray karaa guga hore ama dayrta ee godadka diyaarsan ee qoto dheer oo ku saabsan 40 cm iyo ballaciisu yahay 60-80 cm, ee hoose ee lakabka yar ee dhoobada ayaa la dhigayaa. Dhowr maalmood ka hor intaan la beeriin, waxaad u baahan tahay inaad ku darto Bacriminta organic iyo macdanta, tusaale ahaan, 50 g ash alwaax iyo 150 g of superphosphate leh ciidda iyo buuxi dalool beerto leh isku dar ah. Haddii ciidda ay acidic tahay, waxaad ku dari kartaa lime yar.
Sida loo abuuro quince
Marka laga beerto quince, ka saar carrada qaar ka soo abuur ceelka, dhig a seedling ee ceel, faafin oo xididdadiisa ku meel bannaan oo dabooli leh ciidda laga saaro. Marka laga beerto seedling, hubso in qoorta xididku yahay heer dhulka ah. Goobo ku wareegsan seedling yar yar, ma taaban xididka qoorta. Ka samee wareegga xuddunta ah ee ku haynta biyaha adigoo rushaynaya mashiinka dhoobada ee 5-7 cm oo sarre u ah wareegga taajka ah, ka dibna ku shub seedling leh 30-40 litir oo biyo ah, marka biyaha la nuugayo, ku dar saylaha qalalan iyo peat ama caleemaha qalalan. Wixii horumarinta ka fiican ee xididada, laamihii yaryar waxaa la gaabin karaa 1/3 - 1/2 dhererka, ku xiran tahay size ay. Iska yaree baahida 1-2 cm kor ku xusan kelyaha. Haddii uu jiro caleemo ku saabsan seedling, kala badh iyaga waa in sidoo kale laga saaro.
Dharka ugu sareeya iyo waraabinta quince on dacha xilliyeed
On quince waraabin badan oo ka jawaabaya sii kordhaya wax soo saarka. Sidaa darteed, inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, dhirta u baahan tahay in la si fiican u waraabiyo ugu yaraan saddex jeer: ka hor inta ay bilaabaan ubax, ugxan wanaagsan, bisha Juun ee horumarinta geedka iyo miro, dhamaadka xagaaga ee ku shubay miro. Ugu yaraan hal litir oo biyo ah waa in loo isticmaalaa hal waraabka, iyo geedo waaweyn - ilaa 800 l, si ay u qoyaan dhammaan garaynta geedka.
Cagaarka caadiga ah wuxuu sidoo kale u wanaagsan yahay Bacriminta iyo dharka sare. Guga, marka dabacsan ee ciidda, Bacriminta nitrogen ee 25-30 g halkii 1m² ama Bacriminta macdanta kakan ee 50 g halkii geed ayaa lagu dabaqayaa wareegga wareegga. Haddii aanay suurtagal ahayn in bacriminta quince ee guga, ka dibna ilaa nuskii xagaaga aad ku quudin kartaa bacriminta nitrogen by dila 10 g oo bacriminta leh 10 litir oo biyo ah (si fiican u qoday hareeraha wareegga of taajka). Waxaad sidoo kale ku quudin kartaa geed leh xal xabbo oo lagu qasi karo 5-10 qaybood oo biyo ah.
Ka dib quudinta, quince waa in lagu waraabiyo si fara badan si bacriminta si siman loo qaybiyo. Xilliga dayrta, dalbo digirta, Bacriminta fosfate ee 20 g halkii 1m² iyo Bacriminta dabiiciga ah ee qaabka mulch ee duleedka geed, ka dibna qodo dhulka dushiisa. Si wadajir ah ula socdaan dayrta iyo xilliga qaboobaha, Bacriminta kuwanu waxay si tartiib ah u gali doonaan ciidda waxayna quudiyaan cagaarka.
Caawinta sanadaha hore ee nolosha, sida loo xiro quince
Waxaad ka iibsan kartaa geedo taas oo quince waa la tallaalay warshad hooyada oo kori doona qaabka geedka, inkasta oo inta badan waxay ku koraa baadiyaha.
Waa muhiim! Marka aad iibsato geedo quince, taxadar. Kala-baxayaashu waxay kobciyaan noocyo loogu talagalay isticmaalka sida kaydka noocyada kale ee quince iyo pear. Quince Tani waxay yeelan doontaa miraha yar yar iyo dhalidda yar. Waxay ka duwan tahay caleemaha yaryar oo waaweyn.
Si aad u geed cagaarka ah ee ku yaala aqalkaaga si aad u hesho qaab muuqaal ah oo qurux badan, waa in lagu xiraa marka la beeray. Taageerada waxaa lagu rakibay meesha ugu hooseysa godka, kaas oo quince la beeray, waana in ay ahaataa 1-1.5m oo ka sarraysa laanaha dhalidda, waa lagama maarmaan in la xiro dhamaan laanaheeda taageerada, sidaas darteed farqiga yar ayaa u dhaxeeya iyaga. Sida seedling u koraayo, waa in korontada loo rogo si ka sarreeya si ay quince u ma leexin doono ama jaban. Marka seedling xoog leh oo bilaabmaa inuu midho u dhasho, taageerada ayaa laga saaraa.
Qalabka qumbaha cawska sida loo sameeyo si sax ah
Iyadoo bilawga xilliga dayrta, dhirtu ma daadinayso caleenta muddo dheer, sidaas darteed quinces gooyaa ugu fiican ee la sameeyo horraanta gu'ga, ka hor inta aan la gooyay. Ka saar baahida dhammaan laanta la jajabiyey iyo la qaboojiyey. Sidoo kale, si wanaagsan goosashada, waa inaad gaabisaa koritaanka sanadii hore - laamaha ilaa 50 cm by 1/3, kuwa dheeraadka ah by 1/2, halka laamaha sii kordhaya si lama filaan ah gaaban. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la hubiyo in dhexda taajka aan la midoobin oo si fiican u iftiimay, taas oo ujeedada laamiyada dheeraad ah ayaa si buuxda loo saaray.
Waa muhiim! Iyada oo manjooyin culus tiro badan oo miraha ah ayaa la xiri karaa, taasoo, sababo culus culus, ma weynaan doonaan.
Waa arrin sahlan in dacaayad laga sameeyo quince, taasina waxaa loo samayn karaa siyaabo kala duwan. Midda ugu fudud waa soo saarida by gooyn iyo caleemaha xididka. Gooyn for beerto waa la gooyaa guga marka caleemaha ay horay u sii ubaxyada. Gooynta sanadlaha ah waxay ku habboon tahay doorka abuurka, taas oo ka fiican laanta hoose ee geedka, taas oo si gaar ah looga tagi karo manjooyin. Wixii beeritaanka on gacanta waa 5-6 ku hari (qaybta hoose waa la sameeyaa isla markiiba kelyaha, iyo midka sare - fogaan ah 2-3 cm kelyaha sare, sidaas darteed marka gooyn qalalan, kelyaha weli nool yahay). Caleemaha saaran xitaa gabi ahaanba waa laga saaraa.
Gooyno qoto dheer oo ku saabsan ku dhowaad 2-3 ku hari oo loo diyaariyey dhulka la qodey. Si aad u sameysid heerka badbaadada ee gooynta sare, waxaad ku dabooli kartaa filim adiga oo dhajinaya aqalka dhirta yar. 20 cisho ka dib, gooyntu waxay qaadan doonaan xidid iyo xilliga dayrta waxa lagu beddeli karaa meel joogto ah.
Kobaca Root waxaa la jarjaray qayb yar oo jilif ah, sidaas darteed xididku waa mid cakiran. Waa suurtagal in la fuliyo nidaamkan xilliga gu'ga iyo xilliga dayrta, iyo marka la beero dhoobada, xididka asaasiga ah ayaa badanaa la gaabiyaa si ay dhinaca dambe u bilaabaan inay horumariyaan dhakhso iyo caleemaha laga saaro (marka laga reebo kuwa ugu sarreeya). Wixii geedo noocan oo kale ah waxay u baahan yihiin hooskii yaraa.
Wixii dhalid ah by layering, dayrta, waxaa lagama maarmaan ah in la leexiyo hoos laanta hoose, iyo gooyaa jilif, dabooli dhulka. Guga, xididdada waxaa la aasaasay meelaha meelaha jeexan ee jilif, iyo dayrta, lakabyada ayaa laga soocaa warshad hooyada oo si gooni ah loo beeray. Bacaha waxba kama taro iyadoo la adeegsanayo tallaal. Gooyn kala-duwan oo loo yaqaan "Wetetal" waa la jarjarey karaa marka hore geedaha sii kordhaya guga, marka socodka dheecaanka badani uu bilaabmayo. Geedka quince waxaa lagu beeray geedo sanadle ah oo leh buro (isha), habkana tallaalka waxaa lagu fulin karaa xagaaga bilaha Luulyo-August.
Ma taqaanaa? Sida a stock for keega quince ma isticmaalaan oo kaliya noocyo kale oo quince, laakiin sidoo kale ash buur iyo hawo..
Daabacaadda abuurka waa geedi socodka sii kordhaya ee quince. Inta lagu jiro faafinta by abuurka, sifooyinka noocyada kala duwan ee quince waxaa laga yaabaa in aan la ilaaliyo, si kastaba ha ahaatee, geedo noocan oo kale ah waxay leeyihiin nidaam xidid si fiican u horumarsan iyo si dhakhso ah u koraan, sidaas darteed waxaa badanaa la koray sida stock for gooyn varietal ah.
Seeds for beerto waxay u baahan tahay si ay u ururiyaan miraha bislaado, si fiican u dhaq saabuun iyo qalalan. Ka hor inta aan si toos ah loo beeri Karin, waxay u naqshadeeyeen 2-3 bilood. Xilliga dayrta, abuurka horay loo beeray karaa dhulka furan, ka dibna caleenta wuxuu noqon doonaa dabiici ah, sprouts ayaa soo baxaya guga. Waxaa intaa dheer, abuurka ayaa la dhigi karaa on stratification horaanta February iyo dhammaadka April sidoo kale lagu beeray dhulka u furan.
Inta lagu jiro muddada koritaanka geedo waxay u baahan yihiin in ay laba jeer soo celiyaan: dhirta oo leh laba caleemo oo dhab ah ayaa lagu duubay markii ugu horeysay (iyaga waxaa lagu beeray meel fog oo ah 5 cm midba midka kale), markii labaad waxaa lagama maarmaan u ah geedo ku-tallaalid qiyaastii bil kadib markii beerta ugu horeysay (fogaan ah 17-20 cm). Sannad labaad ee xilli sii kordhaya, waxaa lagu beeray karaa meel joogto ah ama loo isticmaalo sida stock.
Waa muhiim! Quince koray ka soo abuur, miraha dhali doonaa miraha ka dibna dhalmo dhirta.
Quince: goosashada iyo kaydinta
Miraha quince caadi ahaan xagaaga oo dhan ku dhowaad ma koraan oo bilaabaan inay buuxiyaan dhamaadka August. Kama cabsanayaan dhaxan, sidaa daraadeed waxay u baahan yihiin inay soo goostaan ​​dhammaadka Oktoobar, iyaga oo u oggolaanaya inay si fiican u koraan. Wixii kaydinta muddada dheer ee beergooyska, quince waa la goostay by gacanta, jarida ama ka saarto midhaha, ka hortagga iyaga ka dhacaya.
Cunno waxaa lagu kaydiyaa dhammaan jiilaalka heerkul ah -2 ... -5 ° S. Xilliga dayrta, miraha quince waa kuwo aad u adag, oo yar-casiir leh, tartan, dhadhan macaan. Fresh, kuma baabbi'iyee sida cunto, laakiin jarmal aad u dhadhan leh oo udgoon leh, ilaalin, kaabaha, iyo marmalade ayaa la sameeyey. Qeybaha quince ayaa sidoo kale lagu shubi karaa shaah halkii ay ka heli lahaayeen liin. Inta lagu jiro kaydinta, miraha waxay noqonayaan kuwo casiir leh, jilicsan oo macaan.
Ma taqaanaa? Hadalka marmalade ee Portuguese "marmelo" macnaheedu waa "quince".
Quince - geedkii ugu fiican ee beertaada. Ma aha oo kaliya faa'iido leh, laakiin sidoo kale aad u madaxtooyada: caleenta ma aha mid u nugul cudurada iyo quruxda xagaaga oo dhan, iyo dayrta waxay helaysaa midab huruud ah oo qurux badan iyo dayrta dambe. Warshadani sidoo kale waa warshad malab wanaagsan.